Maalmaha Tilmaaman | allsanaag
Odhaahda Maanta (Talk of the Town) By: Faisal Roble
September 28, 2019 waxay ahayd maalin ku tilmaman macaan iyo qadhaadh meel ku wada yaal. Waxaynu aragnay jawigii quruxda badanaa kuna tilmaamnaa buluuglay oo mar labaad guri cusub oo Washington ku yaal ka dul babanaayey, isla markaan ay ku maamuusayaan Soomaali calanka caqiibada badan erayadii cayimnaa ee Cabdillaahi Qarshina Cawaale u tiriyay:
“Qolaba Calankeedu waa Cayn,
Inakaa Keenu Waa Cirka oo Kale.
Calanka cirka lagu sumadeeyey waxa uu ka turjumayaa himalada (optimism) aan xadka lahayn ee umadda Soomaaiyeed qabto, waana sida aan beri hore qoray.
(The sky light-white flag of the Somalis is an expression of the limitless and sky-expansive optimism of the Somali people).
Edidiilo noocaas ah ayaa ka muuqatady shacabkii MW Farmaajo ku wehelinaayey guriga cusub ee safaaradu uu guurtay ee ku yaal 1609 22nd street, NW. Wshimgton DC.
Hase yeshee xanafi kama maqnay sida loo maareeyeey gadashada gurigan cusub ee hoyga u ah sharafta Soomaaliyeed.
Sadex ceebood oo raad kule dawlad- xumada Villa Soomaaliya taal ayaa maalintaa qiimaha muga lahaan lahayd ka dhigay maalin macaan iyo khadhaadh meel ku wada yaal. Waa kuwan sadexda ceebod oo khadhaadhka iyo xanafta leh:
1. Ceebtab1aad: Sida laga soo xigtay shirkada Zillow oo dhismayasha gadda, qiimaysa, iyo xogta sicirka dhulka ururisa waxay sheegtay in guriga Soomaliya gadatay baayaca uu suuqa ku soo galay ahaa $2.7 million. Waxaase umadda Soomaaliyeed loo sheegay in guriga lagu gaday $4.2 million. Waxa maalintaas tilmaamani ku noqotay maamulka MW Farmaajo tumaati ma hadho ah. Waa ceeb culayskeed leh in calan dhacay oo dib buska looga duulin dalaal iyo malaal haleelaan waa waayo aragnimo hor leh.
2. Ceebta 2aad: MW Farmaajo waxa uu umadda u sheegay:
a) in ay gurigan qaaliga ah ku gadeen lacagihii uu ururiyey ee awal R/Wasaarayaasha lagu ridi jiray. Laakiin,
b) Wasiir Bayle oo garab taagnaa ayaa isna ku hadaaqay in gurigan lagu gaday lacag Qatar bixisay; iyo
c) Xog hoose ayaa ah in gurigan lagu gaday sadex lacagood: 1. Lacag Mareykanku ka hayey Soomaaliya oo ka soo hadhay lacagtii lagu gaday dhismihii hore ay Soomaaliya lahaday e US la wareegay cashuur bixin la’aan awgeed. Intii soo hadhay ayaa Soomaaliya meel loogu shubay (trust fund). 2. Ribadii fuushay qaybtii trust funding loogu shubay mudadii lacagta Soomaaliya laga hayey. 3. $300,000 oo kaliya oo Soomaaliya hadeer ku kabtay lacagta cadadkeedu yahay $4.2 million ee gurigan iska kooban lagu gaday.
Lacagta $4.2 million oo lagu gaday guri ku fadhiya 8000 square feet aad ayuu qaali igu yahay umadda Soomaaliyeed.
Sadexdan arimood een kor ku xusay midkii run ah la inoo ma cadayn.
Sikastaba u qaadaa dhig oo gurigan safaaradu hadeer u wareegay mid $4.2 million u qalma innaba ma aha.
Fakir kale oo been ah ayaa umadda lagu hoday – In hadeer safaarada la furay sidii 1990 loo xidhay. Runtu arintaas ka fog.
Safaarada Soomaaliya waxa dib loo furay 2015. Waxa runtii in Maraykanku dib u furo horseeday sadex arimood:
1. MW Xassan Sheikh Maxamuud oo 2013 Time Magazine u aqoonsatay 100 shaqsi ee aduunku ugu sumcad wacan.
2. MW Obama oo MW Xasan fursad baaxad leh siiyey Aqaalka Cadna (White House) si maqaam sere ah ugu qaabilay.
3. MW Xasan Sheikh oo ahaa MW ugu horeeyey e nasiib u yeeshay in uu heshiiskii Busan saxeexo (Waa heshiiskii xaqiijiyey mataanaynta Deeq-bixiyayaasha iyo Soomaaliya).
Markuu Wasiir Arimaha Dibadu (Axmed Cawad) hadalkii la wareegay, waxa uu si runta u dhow u xusay in Safasrada la furay 2015. Waxa uu aad ugu mahadnaqay intii gacan siisay xiligaas oo xili adag ahaa.
Laakiin waxa uu isna gidi ahaanba carabkiisa ka dhowray shaqsiyaad aad safaarada u gacan qabtay laakiin hadeer Wasiir Cawad u arko dad aan dawlada Farmaajo xulifo la ahayn.
Waxaa ka mid ah Yasmin Maxamuud oo ahayd xidhiidhiyihii munaasabada xafladii dhacday habeenkaas. (master of ceremony xafladii balaadhnayd ee Washington lagu qabtay. Yaasmiin waa gabadhii qortay Buuga The Nomad) iyo saygeeda C/Karim Xassan oo aad ula shaqeeyey safaarada iyo Ambassador Cawad. Xafladaas waxaa ka soo qayb galay wufuud culus oo aduunka iyo Mareykanba ka socotay.
Ma ahayn in Ambassador Cawad inta dawlada raacsan oo kaliya uu maamuuso (nations are bigger than parochial politics).
Si kastaba ha ahaatee, Cawaale iyo Calanka waa in xanafta, xatooyada, iyo siyaasad kooxeedka laga dhowraa.
← Wakiilka Maxaa Lagu Weeraray? Suldaan Siciid oo lagu soo Garoowe →